Myanma News » အမှောင်ခေတ်မှာ ကြောင်ဖြစ်လာ Darkness	25
ခင်ဇော် says: Post of the Month.
ဦးကျောက်ခဲ says: မှန်၏… မှန်၏… မှန်၏… လို့ ထောက်ခံသွားပါတယ်…
ခင်ဇော် says: အမှတ်မရှိပဲ
kai says: ဒုက္ခပဲ.. ကျုပ်ရေးရမှာတွေကို .. ဘယ်ကြောင်စုတ်ကြောင်နာဝင်ရေးသွားတာလဲကွ..
အမြှီးထောင်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: ကျန်းးး
Shwe Ei says: -အူးဇင်းတို့ကိုပါ ဘုန်းကြီးမှတ်ပုံတင် လုပ်ပေးသင့်တာ
Wow says: အူးနေ၀င်းလက်ထက်ကလားမသိဝူး သာသနာတော်သန့်ရှင်းရေးဆိုပီး တစ်ခါလုပ်ဖူးလားလို့…
kai says: သာသနာကို.. ဘိုနေ၀င်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး.. မဟနကောက်ထောင်ပေးလိုက်တာပဲ..။
Ma Ma says: မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးဦးဝိစိတ္တ ရှိတုန်းကတည်းက မဟနတည်ထောင်ဖို့လုပ်တာကို လက်မခံပဲ ကန့်ကွက်ခဲ့တယ်လို့ ဖတ်ဖူးတယ်။
Paing Lay says: ဖွဘုတ်မှာတော့ သြဇီက ကော်ဖီဆိုင်မှာ အလံထောင်ခိုင်းတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မျိုးစောင့်တွေကတော့ ထုံးစံအတိုင်း Like ပေးပါဦး Share ပါဦးဆိုပြီး အလုပ်ရှုပ်နေကြလေရဲ့
Ma Ma says: ကြားရ သိရတာ ကြောက်စရာအတော်ကောင်းတယ်။
Yae Myae Tha Ninn says: ပြောသမျှ ပါးစပ် အဟောင်းသားလေးနဲ့ နားထောင်သွားပါတယ်..ဗျာ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
ဖားသက်ပြင်း says: ကိုကိုဝီကို​ကျောချင်းကပ်​ကြ
lu lu says: ကိုယ့်ဝါဒ တွေ မတော်မတရာလိုက်ဖြန့် နေမှတော့
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: ဒီပိုစ့်ကို ဖတ်တာ နှစ်ခေါက်ရှိပြီ။
Zaw Lwin says: ရှေ့ ရှောက် ရင်မောစရာပါ။
aye.kk says: ဝိနည်း
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဖဘမှာ ရှယ်​ချင်​ပါတယ်​.. အူး​ကြောင်​
မြစပဲရိုး says: သူများ ကို မထိခိုက် တဲ့၊ အမုန်းတရား မပါတဲ့ “Freedom of Speech” ဆိုတာ ရှိမှ ဒီမိုကရေစီ ရဲ့ အနှစ်သာရ ကို မြင်ရမှာမို့
kyeemite says: .ဖဘ ကစာလေးနဲ့ အားဖြည့်ရင်းထောက်ခံသွားပါဂျောင်းးးး
uncle gyi says: ရှုံးသူတရားခံ
La Yeik says: တခါတလေ လည်း ပြောရတာ သိပ်ခက်တယ် အူးကြောင်….
Thanlwinoo says: ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့ ဗာတီကန်တိုင်းပြည်လို မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ မဘသတိုင်းပြည် ဖြစ်ခွင့်မပေးခဲ့ရင်တောင် အာဏာရှင်တွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ လက်နက်ကိုင်တပ်တွေ၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေ၊ တရားရုံးတွေကိုသုံးပြီး မဘသရဲ့သြဇာကို လိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာအထိ ကြီးထွားစေဦးမှာပါ…။
ဦးဦးပါလေရာ says: မဘသ ဘယ်လောက်စွမ်းသလဲဆိုတော့..
manawphyulay says: ဦးကြောင်… လိုင်းကြောင်..